Mucaaradnimadii iyo Maxaafadnimadii | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Nolosha iyo safarka siyaasadda ayaa u qaybsama mucaarad iyo muxaafid. Maalin aad wax dhaleecaynayso iyo maalin adiga lagu dhaleecaynayo. Maalin aad wax faaqidayso iyo maalin adiga lagu faalaynayo. Maalin ay kuu toosan tahay iyo maalin ay kaa jiifto. Sidaa darteed, maalmihii nolosha iga soo maray ayay ka mid ahaayeen maalin aan mucaaradka dhex boodayay oo aan u arkayay dariiq wax lagu toosinayo oo adeegga bulshada iyo hoggaaminta dalka sida markaa jirtay si ka fiican loo beddeli karayey, si ay bulshadu u helaan qaab-nololeed tan ay ku sugan yihiin ka wanaagsan; maalin kalana waxaan hor boodayay oo ahaa muxaafid taageera oo difaaca xukuumaddii markaa aan ka mid ahaa, wakhtigaana waxaan u arkayay waajibaadka iyo xilka i saaran in ay ka mid tahay muxaafidnimadu. Waxaa aan ku hawlanaa ka qayb qaadashada maamul wanaagsan oo bulshadiisa u adeega. Hadraawi wuxuu yidhi“marka aad duleedaw sidaad doontay weydaa sidaad diidday yeeshaa”
Xaqiiqadu waxay tahay waa labo shaqo oo loo baahan yahay. Waa labo hawlood oo iska soo horjeeda. Waxaa dhacda in labada jeerba dadka ku hawlani ay khaladaad galaan. Way dhacdaa khalad shaqadu keento oo siyaado ku ah hawsha, oo ay keenta garashada gurracan iyo marmarka qaarkeed ay siyaasiga garbo isu caddayso. Balse labadaba waxaa laga bartaa khibrad iyo waayo-aragnimo marka danbe laga faa’idaysto. Wakhtigaa iyo maalmahaa kala duwan ayaan jecelahay in aan wax ka mid ah halka ugu soo bandhigo akhristaha buuggan.
Waxay ahayd maalin Isniin ah 05|05|2008, sidaan meelo hore ku soo xusay markii aan ka tagay shaqadii Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Xarguftii noo dhexaysay xukuumaddii talada haysay ee ka dhalatay warbixintii aan ku eedeeyay xukuumaddu waxay sababtay in aan si dabiici ah ugu muuqdo mucaarad, xataa anigoo aan wax ficila ah samayn. Muddo ka dibna waxaan si weyn u dardar geliyey mucaaridnimo hor leh, waxaanan si toos ah ula saftay xisbigii mucaaridka ahaa ee Kulmiye, ee aan markii horaba fikirkiisa siyaasiga ah taageeri jiray.
Mucaaradnimadu mabda’ ahaan waxay ka mid tahay hannaanka dimuquraaddiyadda. Waa inaad saxdo oo dheellitirto xukuumadda iyo dadka talada haya, adigoo metelaya inta aan ku qanacsanayn barnaamijka iyo siyaasadda xisbiga talada haya. Iyadoo ay jiraan wixii qarannimada khuseeyaa in ay yihiin lama taabtaan ay mucaaradka iyo muxaafadkuba wada ilaaliyaan, Xukuumada iyo xisbigeeda waxaa xil ka saaran shaqada guud ee qaranka sidaa darteed wixii wanaagsan ee ay qabtaan waa loo doortay, balse mucaaradka waxaa xil ka saaran yahay wixii khaldama ama laga gaabiyo in uu tilmaamo.
Haddaba waxaan qorshaystay in aan mucaaradad kala hor imaaddo xukuumaddii, aniga oo kaashanaya xisbiga Kulmiye oo markaa ku hawlanaa olole xooggan oo mucaaradeed. Waa iska suurtagal in aad khalad gasho adigoo is leh khalad toosi. Waxaa iyana beryahaa taagnaa arrin dhalisay xiisad kulul iyo mucaaridad xooggan oo ay dadku ugu wanqaleen magaca “Xarbul-Qanamka”, taas oo ahayd xukuumaddii Daahir Rayaale waxay dhoofintii xoolaha kooto ugu xidhay nin Carbeed oo la odhan jiray AL-Jaabiri. Tallaabadaasuna waxay dhalisay qaylo xoog leh oo lagaga soo horjeestay xukuumaddii.
Xiisaddaa iyo xamaasaddaa mucaaaridnimo aad baan u taageeray, gaar ahaan bulshadii adhiilayaasha oo ku kacay xukuumadda aad baan u taageeray. Waxaa la abaabulay mooshin in baarlamaanka la geeyo, iyadoo madaxdii xooluhu ka hadleen baarlamaanka soo bandhigeen eedaymo xooggan. Sidoo kale waxaa ganacsatadii taageeray rag koox ah oo mujaahidiintii SNM ahaa, oo ay hoggaaminayeen Muj. Ibraahim Dhegeweyne, Xasan Guure iyo rag kale oo haldoor ahaa.
Maalin maalmaha ka mid ah, waxa gurigayga iigu yimi Ibraahim Dhegeweyne iyo rag kale oo isaga la socday oo ka mid ahaa mujaahidiintii SNM. Dabadeed waxay iga codsadeen in aan Burco u raaco, oo aan taageero dhaqdhaqaaqii lagaga soo horjeeday adhigii kootada loogu xidhay. Burco ayaannu tagnay, ka dibna dabkii mucaaridadda, ee marka horeba halkaa ka shidnaa, ayaa gaas lagu shubay oo aannu la sii hurinnay. Ganacsatadii adhiilayaasha iyo qolooyinkii mujaahidiinta ahaa ee taageerayey waxay yeesheen shirar, abaabul iyo wada xaajood bal sida ugu habboon ee loo waajihi lahaa arrintii kootada adhiga. Jawigii mar keliya ayuu isu beddelay abaabul hubaysan.
Nimankii jabhadda ahaa ee dagaallamayey meel ay u baxeenba way baxeen. Nasiib wanaag, wax dagaal ahi ma dhicin oo qolooyinkii hubaysnaa iyo kooxdii wax abaabulaysay ayaa is-afgaranwaa ka dhex dhacay.
Xukuumaddii markay aragtay mucaaridadda xoogga leh ee halkaa ka socota, ayuun baa lay xasuustay. Xilligaa waxaan joogay magaalada Burco. Xukuumaddu waxay ogayd inaan ka soo horjeeday oo aan mucaarid ku ahaa, isla markaana aan ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu firfircoon ee dhaqdhaqaaqii “Xarbul-Qanamka” dabka ku sii hurinayey.
Maalin Sabti ah, goor fiid ah oo aan ku baqoolsanaa reerkayga oo deggenaa magaalada Ina Af-madoobe, markaan dhaafay kantoroollada Burco iyo Beer ayaa ciidamo ay xukuumaddu ii sii diyaarisay ay jidka iga sii raaceen. Dabadeed gurigayga agtiisa ayaa la iga qabtay. Waa la i soo qaaday, kaddibna isla habeenkiiba waxaa la ii soo dhaadhiciyey Hargeysa, oo CID-da ayaa la igu xidhay. Muddo bil ah ayaan u xidhnaa xadhig siyaasadeed oo aan rumaan iyo maxakamad la’aan ku xidhnaa. Markii wax dambi ah la igu waayeyna waa la iska kay sii daayey. Dabcan way jireen odayaal ka shaqeeyay sii dayntayda. Had iyo jeeraale markay xukuumadi guuldarraysato ee ay lumiso kalsoonida shacabkeeda, waxay badanaaba isku daydaa inay marin-habaabiso ra’yiga dadweynaha. Xilligii ay socdeen qalalaasihii iyo iska-hor-imaadkii loogu magac daray “Xarbul-Qanamka”, arrintu may ahayn sidii ay xukuumaddii u buunbuunisay! Xukuumaddii talada haysay waxay iska hor yimaaddeen niman malayshiyo ahaa oo hubaysnaa oo ay maal-galinayeen bulshadii xoolaha ka ganacsan jirtay iyo nin la odhan jiray AL-Yassir oo ganacsade Carbeed ahaa.
Dabcan, qof ahaan xiisaddaa iyo xamaasaddaa mucaaaridnimo ee lagaga soo horjeeday xukuumaddii siyaasad ahaan aad baan u taageeray , balse maan ahayn nin hubaysan oo qori sita oo dagaallamayey.
Waqtigii ay socdeen qalalaasihii “Xarbul-Qanamka”; waxaan si kalsooni leh ummadda ugu caddeeyey in haba yaraatee aanan xidhiidh toos ah iyo mid dadban midnaba la lahayn kooxo xagjir ah ama argagixiso ah oo ku adeegta magaca diinteenna suubban, ummadda Muslinka ahna ku gumaadda. In kasta oo aan ganacsatada garab siiyay anigoo u arkayey kacdoonka bulshada xoolaha ka ganacsadaa inay tahay goljilic xukuumadda lagaga mucaaradi karo, Haddiiba saacadda dib loo celin lahaa, maraba kuma tallaabsadeen tallaabo kasta oo sababi karta rebshad ama waxyeelayn karta dawladnimada
Wakhtigii doorashada ka hor ayay qorshaysnayd in diiwaangelinta codbixiyaha dalka laga bilaabo, xisbigii Kulmiye wuxuu qaatay in uu ka qayb qaato oo uu taageerayaashiisa ku wacyigeliyo in ay kaadhka diiwaangelinta qaataan si ay u codayn karaan xilliga doorashada. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa la iigu yeedhay kulan ay qabanqaabiyeen xildhibaannadii Kulmiye taageeri jiray iyo siyaasiyiin miisaan leh xisbiga ah oo aannu isku degaan ka soo jeedno. Shirkaa waxaa lagaga arrinsanayey qaabka ugu habboon ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha looga suurto gelin kari lahaa gobollada dalka oo dhan, iyadoo xoogga la saaray meelaha xisbigu ugu taageerada badan yahay, waxaana guddoominayay Xil. Adan Tarabbi Oogle. Maadaama aan xogo badan ka hayay qaabka iyo mashruucii diiwaangelinta codbixiyeyaasha guud ahaan xilligii aan Komishinka doorashooyinka ka mid ahaa, waxa la i weydiiyey talabixin la xidhiidha bal sida ugu habboon ee ummadda gobollodaa uu musharruxu (Silanyo) ka soo jeedo loo wacyi gelin karo, looguna baraarujin karo in ay is diwaangeliyaan oo ay kaadhadhka codbixintana qaataan.
Mishkiladda ugu weyn ee laga baqayey waxay ahayd: dhulka la doonayey in diiwaangelinta laga hirgeliyo oo aad u baaxad weynaa iyo dadka ku nool gobollada bariga oo u badan reer guuraa xoolo-dhaqato ah. Tusaale ahaan qoys xoolo-dhaqato ah oo ka kooban 8 qof, ugu badnaan 2 ilaa 3 qof ayuun baa magaalada ama goobta codbixinta tegi kara oo codkooda dhiiban kara, inta kalana ma imanayaan oo baylahdii iyo hawshoodii maalinlaha ahayd ayaanay ka soo haleelayn.
Haddaba, waxaan soo diyaariyey, una soo bandhigay shirkii, warbixin iyo qorshe aad u faahfaahsan iyo soo jeedin, lagu beraarujiyo oo lagu wacyi geliyo bulshada ku nool saddexda gobol ee na loo xilsaaray. “Qorshahaa iyo taladaa aad soo jeedisay waannu kula qaadannay. Qaabkaa aad u soo bandhigtayna waa lagu hawl geli doonaa. Guddigii wacyigelinta diiwaangelinta loo xilsaaray waxay ka koobnaan doontaa 17 xubnood. Guddigana adigaa guddoomiye u ah,” ayuu Aadan Tarabbi ku soo gebagebeeyay, shirkiina wuu ku raacay. Waxa ku jiray xubne badan oo siyaasiyiin ah oo miisaan lahaa, oo ay ka mid ahaayeen: Xil Adan Tarabbi, Maxamed Kaahin, Yuusuf Tuke (AHUN), Axmed Dhigane iyo rag kale oo badan oo miisaan lahaa.
Waxa aannu isla markiiba bilawnay fulintii hawsha oo ay ugu horraysay abaabul xooggan oo wacyigelineed, dhaqaala-ururin, diyaarinta ku dhowaad ilaa 150 oday oo bulshada saamayn ku lahaa. Ka dibna waxaannu diyaariyey gaadiidkii, shidaalkii iyo wixii sahay loo baahnaa. Safarkii iyo socdaalkii lagu tagayey gobollada bariga waxaan u kala qaybiyey 4 jiho oo kala duwan, ka bacdina waxaan isku xidhay dadkii iyo gaadiidkii ka hawlgeli lahaa jiho kasta. Waxa magaalo-magaalo iyo tuulo-tuulo loo diyaariyay codbixiyayaashii halkaa ku dhaqnaa, si ay xisbiga ugu xidhmaan, uguna codeeyaan xilliga doorashada.
Abaabulkii ayaa isku dubba dhacay, taageerayaashii ayaa si laxaad leh u diyaar garoobay, xukuumaddiina waxay ka bixisay dareen werwer leh, waxaana saldhig u ahaa qaabka iyo hannaanka aannu u abaabulnay bulshada ku nool gobolladaa, oo ahaa kacdoon siyaasadeed. Diiwaangelinta waxay ku dhammaatay qurux iyo guul, taageerayaashii kulmiyena waxay isu diwaangeliyeen si laxaad leh. Muddo ka dibna waxa soo galay ololihii doorashada oo dadkii oo diyaarsan ayaa sidaa ku galay doorashadii, waxaana xisbigii ku guulaystay codad aad u badan.
Qof kasta oo masuul looga dhigay hawl cayiman waxaa laga sugayaa in shaqadii loo diray uu sida uga habboon uga midhadhaliyo. Minqiyaaska iyo bartilmaameedka guusha ama guuldarraduna wuxuu noqdaa kolba sida ay u arkaan cidda shaqada u diratay iyo kolba sida ay bulshadu uga dareenceliyaan hawshaa la qabtay!! Haddaba, marka ay bulshadaadu qirto ee ay ka maragkacdo qiimaha iyo waxtarka ay leedahay hawl aad dadkaaga u qabatay, waxay daliil iyo tilmaanba u tahay in aad qof ahaan ku tallaabsatay guul iyo horumar, intuu doonaba xaddigoodu ha leekaadee!
Markuu soo dhowaa wakhtigii ololaha, oo aan doonayay in aan safar u yara baxo, ayaa guddoomiyhii Kulmiye Axmed Silanyo, oo aad ula dhacsanaa shaqadii aan ka soo qabtay wacyigelinta, igu yidhi “adeer ololuhu waa isku mid oo waa intan aad soo qabateen ee adeer igala shaqeeya, oo safarka ka joog.” Waxa aannu noo diray aniga iyo Axmed Dhigane in aan soo diyaarinno qorshihii ololaha.
Maalmo ka dib waxaan u keenay qorshihii oo aan dalka u qaybiyay in looga hawl galo, labo meelood bari iyo galbeed sidoo kale aan soo jeediyay in ay kala hoggaamiyaan Dr Gaboose iyo Cali Maarshaal AHUN, oo ahaa siyaasiyiin saamayn badan bulshada ku lahaa, isla markaan lahaa firfircooni badan. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dhismaha iyo hannaanka shaqo ee ololaha, oo aannu xubno badan u soo jeedinnay in laga hawl geliyo.
Sidoo kale waxaan ku jiray guddi khaas ah oo si gaar ah ugala shaqaysa musharraxa hawlihii dhaqaalaha iyo waxyaalaha lagama maarmaanka u ahaa ololaha. Waxaan odhan karayaa wuxuu ahaa nooc kacdoon ah oo ay taageerayaasho gees ilaa gees u abaabulaayeen si aad u heer sarraysa, oo ay xamaasaddu ku badan tahay.
Waxaan tilmaamayaa xidhiidhkii noo dhexeeyay guddoomiyaha iyo hawshii aan kala shaqaynayay, balse waxaa jirtay masuuliyiinta xisbiga oo tira badnaa in mid kastaa meel qaabbilsanaa oo ay socotay shaqo ballaadhan oo ay gacanta ku hayeen hawlwadeennadii xisbiga iyo masuuliyiintii heerarka kala duwan ee xisbiga, oo aanan intooda badan xidhiidh lahayn, maadaama oo aan shirkad masuul ka ahaa oo xilligaa aanan toos uga muuqan karayn saaxadda siyaasadda.
Samaysanka Garabkii Isbahaysiga Kulmiye
Maalintii Kulmiye ku guulaystay doorashada, ee madaxweyne Silanyo talada dalka qabtay, wax yar uun ka dib waxaa soo baxday in guddoomiye-ku-xigeenkii 1aad, Muuse Biixi, uu bilaabay damaca ah in madaxweynuhu ku soo wareejiya guddoomiyannimada xisbiga sidii ay hore ugu ballameen. Waxaa iyana barbar socotay rag kale, oo Cabdicasiis Samaale ka mid yahay, oo hunguri ka hayay booskaa, kuwaas madaxweynahana culays ku saarayay in aannu wareejin ee lagu tartamo. Si kasta ha ahaatee, 45 maalmood ka dib markii uu xilka madaxweynannimo hayay, ayuu xilkii guddoomiyaha si kumeelgaadh ah Muuse ugu wareejiyay.
Waxay ahayd 15|08|2013, markii Cabdicasiis Samaale, oo ah wasiirka maaliyadda, noogu yimi guriga fadhiga ee madaxweynaha abbaaro 8:00 subaxnimo, iyadoo ay quraacanayaan madaxweynaha iyo marwadiisu.
Wuxuu madaxweynaha u sheegay in uu doonayo in uu shirweyanaha soo socda Muuse Biixi kula tartamo kursiga guddoomiyaha, isla markaana uu ka doonayo in uu arrintaa la socodsiiyo isaga oo doonaya in uu helo dareenkiisa. Madaxweynuhu wuxuu ku yidhi adeer waxba kama qabo, waxa aannu u muujiyay kalsooni fiican. Maadaama oo aan helay signalkii madaxweynaha, waxaan Samaale u muujiyay taageero, in kasta oo aan ku mashquulsanaa mashaariicdii horumarka ee ay waddooyinku ka midka ahaayeen. Samaale wuxuu bilaabay kaambayn uu kursiga guddoomiyaha ugu jiro oo debadda u soo baxay.
Xaqiiqo ahaan wuxuu ahaa nin olole badan, balse waxaa dedaalkiisa ka dhex muuqday lacag. Wuxuuna ahaa wasiirkii maaliyadda, oo taasina waxay ku keentay in lagu dhaleeceeyo musuqmaasuq. Markii muddo hirdankii socday ee la isku birjabay, ayaa maalin dambe oo aan ku maqnaa London, waxaa dhacday sabab kastaba ha ku timaadee in madaxwaynuhu qaatay ga,aan ah in aan Muuse Biixi aan lagula tartamin gudoomiyenimadda xisbiga sidaa darteed uu habeen habeenadda ka mid ah u yeedhay Cabdicasiis Samaale oo mansabkan u tafaxaydnaa, una sheegay go,aankiisa cusub laakiin arintani wasiirkii maaliyadda ee xiligaas may farax gelin aad buuna uga xumaaday, isaga oo aan shaqo tegin dhawr ayaamood oo ku negaaday guriga uu ka degan yahay magaaladda Hargeysa, hadalkii isaga iyo madaxwaynaha dhex marayna debedda ayuu u soo baxay, maalintaa wuxuu madaxwaynuhu go,aansaday in uu yeedho xubno ka mid ah xubnihii ugu firfircoonaa Gudidda Fulinta Xisbiga ee daafaca adag u ahaa madaxwayne Silanyo oo ka koobnaa 11 xubnood oo isugu jirey xubno ka tirsan hogaanka xisbiga, wasiiradda xukuumadda, Iyo fulinta xisbiga, waxa aannu ka codsaday laba arimood oo kala ah in la qaataan go,aankiisan cusub ee Muuse tartan la,aan ugu cumaamadaya guoomiyanimada xosbiga, Iyo in ay la qanciyaan Cabdicasiis si uu uga tanaasulo tartanka jagada gudoomiyaha.
Dood dheer iyo balan qaad madaxwaynuhu balan qaaday in loo sinaan doono murashaxnimadda jagada madaxwaynaha marka ay timaado ka di dib, waxa xiise gaar ah lahayd oo xusid mudan hadal uu goobta ka yidhi wasiir Abiib Diiriye Nuuroo ahaa”Maxawayne kaa aqbalay laakiin waxaan kuu sheegayaa laba nin oo reer Somaliland ah oo ahaa AHN Good Abees iyo Xuble oo saaxiibo ahaa ayaa Good wuxuu yidhi waxaan haystaa PHD, waa la yaabay oo tacliin uu dhigtay lama ogayne la aamusay oo la eegay, ku yeh miyaad ila yaabteen dee i waydiiya waxa aan ku haysto PHD ee aan ku takhasusay, noo sheeg baa mar qudha la wada yidhi, Xuble ayaan ku haystaa ayuu yidhi, waxaan uga socdaa hadaan Abiib ahay Muuse Biixi ayaan PHD ku haystaa hadaad gudoomiyihii u daysay, maalinta shirku dhaco ee aad gudoomiye rasmi ah u cumaamado haddii uu maalinta todobaad kula gaadho oo uu kugu qabsan waayo murashaxnimadda takhasuskaygaasi waa been” sidii ayaa loogu doortay gudoomiyihii xisbiga Muuse Biix. Haddaba shan maalmood uun ka dib, aniga iyo madaxweynaha oo socdaal shaqo oo aannu waddada Wajaale oo la samaynayey kaga soo noqonay oo aanu weli gaadhiga saaranahay, ayaa naloo soo sheegay in Muuse Biixi ku dhawaaqay in uu u taaganyahay musharaxa xisbiga, waxaanu furnay idaacadda afka Soomaaliga ee BBc ee barnaamijka labadda duhurnimo, waxa aannu ka dhegaysanay Muuse oo sheegaya in uu musharax yahay isla markaana diyaar u yahay hadii Silanyo la tartamayo, madaxwaynuhu wuxuu mar kale u yeedhay xubnihii ahaa 11 oo uu marar badana isaga dhigay weeraraddii joogtadda ahaa ee Muuse Biixi maalintaana wuxuu ka codsaday inay garab istaagaan hiilkoodana uu u baahna yahay dood iyo cabasho dheer ka dib waa laysla qaatay, maalintaa madaxwayne Silanyo waxa hadaladdiisa ka mid ahayd “waad haysataan kalsoonidayda sidaa ku hawl gala kalsoonidaydda ku hawl gala waa kama dambays haddii ay keenayso in Muuse Biixi aynu Mardheera ku ridno waad haysataan kalsoonidaydda waxaan wacad ilaahay idiinku marayaa in aanan idinka raacin Muuse oo aanan idin xagal daacin”.
Muddo ka dib waxaa bilaabmay guuxii musharaxnimada. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa qado ii sameeyay ganacsade Maxamed Aw Siciid. Isagoo aan ii sii sheeginna, waxaa qadadii nagala soo qayb galay guddoomiye Muuse Biixi. Wuxuu ganacsaduhu ii sheegay in uu doonayo in uu musharraxnimada mustaqbalka ee Kulmiye ku dhiso Muuse Biixi, isla markaana uu iga doonayo in aan ku taageero. Wakhtigaa waxaa muddo xileedkii madaxweynaha ka hadhsanaa wax ku dhow labo sannadood. Sidaa darteed, waxaan ku idhi wakhti dheer ayaa innaga xiga, madaxweynihiina talo kamaannu yeelan arrintan, Muusana waxba iskagama ogin, labo todobaad oo siyaasadeedna waa wakhti dheer e, waxaan sugayaa inta madaxweynuhu is sharaxayo ama tanaasulayo.
Ganacsaduhu dedaal weyn ayuu geliyay taageeriddiisa uu u hayo Muuse Biixi. Dedaaladii ganacsadahani ugu jiray dhismaha Muuse waxa kale oo ka mid ahaa, guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa ii sheegay in uu la soo hadlay wakhtigii aannu ku soo biiraynay xisbiga Waddani isaga oo ku yidhi: “Waxaan ku siinayaa lacag gaadhaysa labaatan milyan oo Dollar haddii aad ka joojiso xisbigaaga Xirsi Cali X. Xasan.” Taa mid la mid ah Cabdilqaadir Jirde wuxuu noo sheegay: “wuxuu igu baayacay shan milyan oo Dollar.”
Waxaa isaguna ku soo biiray dawladdii Maxamed Biixi Yoonis, oo noqday wasiirka arrimaha dibadda, oo laftarkiisuna lahaa damac madaxweyne. In kasta oo uu ahaa qof leh xidhiidho badan, waaya-arag ah, oo in ka badan afartan sannadood soo shaqeeyay, isla markaana ahaa dadkii ugu derejo sarreeyay Soomaalida ka soo shaqaysay jamciyadda quruumaha ka dhexaysa, runtii maqal mooyee, hore umaan aqoon oo waxaa intii aan wasiirka laga dhigin wax yar ka hor Addis Ababa isku kaaya baray Silanyo iyo qoyskiisa. Isla markaana waxaa muuqatay in ay qoyska xidhiidh dheer lahaayeen, oo ay carrab laalaadiyeen in ay ku taageeri doonaan musharraxnimada madaxweyaha ee mustaqbalka. Dad badan oo kale oo xildhibaan Kijaandhe ka mid ahaa ayaa iyaguna damac lahaa. Dawladdii oo shaqaynaysa ayuu bilaabmay hirdan iyo loollan musharrax, waxaanay naga mashquulisay hawlihii dawladda. Madaxweynaha xilligaa waxaan u soo jeediyay in arrintaa dib loo dhigo, oo xilliga doorashada golaha dhexe ay soo dhawaato laga dhigo, intaana aynu mashaariicda inoo qabyada ah dhammaystirano.
Hayeeshee xilligaa waxaa muuqatay in qoyskii Silanyo iyo xubno kale ay jaanta isla heleen oo Muuse lagu heshiiyay. Samaalena dawladdii wuu ka baxay, oo xurguf ayaa soo kala dhex martay isaga iyo qoyskii Silanyo. Waxaa intaa dheer, muddadii shanta sannadood iyo badhka ahayd Muuse iyo madaxweynuhu isma dhisayn, manay lahayn xidhiidh wanaagsan ee inta badan way is hayeen. Marar aan waydiiyay madaxweynaha, kumuu qanacsanayn hoggaaminta Muuse. Sidoo kale mar kale oo ay u yimaaddeen ilaa afartan xubnood oo ka koobnaa wasiirro iyo xubnaha fulinta ee xisbiga waxay waydiiyeen miyaad dhisaysaa Muuse, wuxuu yidhi “maya ee aniga ayaa is sharraxaaya!”
Markii aan arkay sida wax u socdaan ayaan madaxweynaha u imi oo waydiiyay in uu jiro cid gaar ah oo ugu talo galay in uu dhiso. Wuxuu yidhi “waa lagu tartamayaa ee shakhsi gaar ah ma wato”; isagoo weliba saxaafaddana sidaa ka sheegay. Wax kastaa ha beddelaan e, mar keliya ayuu madaxweynihii qaatay go’aankan, iyadoo aanay wax talawadaag ah yeelan kaadirkii xisbigu. Xaqiiqo ahaan kumaan qancin madaxweynihii ii diray in aan ka difaacaa, haddana in uu igu yidhaahdo ku daba fayl oo Muuse dhis. Waxaa iyaguna ka biyadiiday, oo qaadan waayey sidii wax u socdeen xubno badan oo qoorweyntii xukuumadda iyo xisbigaba ahaa oo ay ka mid yihiin labo hoggaankii ka tirsan (guddoomiye-xigeenkii 2aad, xildhibaan Waabeeyo, iyo guddoomiye-xigeenkii 3aad xildhibaan Talyanle AHUN) iyo labadii xubnood ee shirguddoonka golaha wakiillada Kulmiye ugu jiray (guddoomiye-xigeenkii 1aad iyo 2aad, mudane Baashe iyo mudane Cali Yuusuf).
Shirdoceedyo aannu yeelannay in badan oo qoorweyntii xisbiga ah, ayaannu ku gorfaynay in aannu isku xidhno saddexdii musharrax ee Samaale, Maxamed Biixi iyo Kijaandhe. Waxaannu isla qaadannay in aannu isu tanaasulsiinno, oo mid loo daayo marka doorashadu soo dhowaato. Markii loollankii kululaaday. ayaa madaxweynihii noo yeedhay annagoo ah wasiirrada ay isku xaafadda ahaayeen, oo nagu yidhi “waxaan doonayaa in aan dhiso Muuse Biixi, oo aad igu raacdaan!” Dabcan waxay ahayd culays siyaasadeed oo madaxweynuhu na saaray.
Arrintaasi waxay noqotay af-kala-qaad, waxaan madaxweynaha waydiiyay ma amar baa, mise waa soojeedin? Wuxuu yidhi “waa soojeedin, oo qof kastaa wuxuu leeyahay madaxbannaanidiisa siyaasadeed.” Dood badan ka dib arrintii waannu isla mari waynay. Saddex xubnood oo aan ku jiro ayaannu ugu sheegnay in aannu arrintaa go’aankeeda saddex maalmood gudohood ku siin karayno, iyadoo ay isdiidmo badani dhexdayada ka muuqato. Habeennimadii waxaannu saddexdii musharrax ku wargelinnay arrinta soo korodhay, oo ay sii hayeen in dareen jiro. Waxaannu u balannay shir 10:00 Subaxnimo.
Habeenkii markii aan gurigaygii tegay, ee aan arrintii rogrogay waxaan go’aansaday in aan shaqada ka tago maadaama oo aan madaxweynihii labo waddo kala qaadnay, oo ku kala baydhnay mustaqbalkii siyaasadda. Sidoo kale maslaxaddii xisbiga iyo qaranka midna aanay iiga muuqan waddada uu doortay, dooddiina aan isla meel dhigi kari weynay.
Subixii 26|10|2015, ayaan shir isugu nimi xubnihii ku bahoobay dhismaha saddexda musharax tiro badan ah iyo taageerayaashoodii. Dood iyo falanqayn badan ka dib, waxaa noo soo baxday in shirkii golaha dhexe afduuban yahay, culayskii madaxweyanahuna dacal maray, sidaa darteed waxaannu isla qaadannay in aannaan shirkaa ka qayb gelin. Isla markaana xubnahayagii wasiirrada ahaa waxaannu ku dhowaaqnay shaqa-ka-tegis. Ilaa 14 xubnood oo golihii wasiirrada ah iyo xubno kale oo xilal kala duwan hayay ayaa maalintaa shaqadii ka tegay shirkiina qaaddacay. Halkaa ayaan ku aasaasnay garab la baxay Isbahaysiga Kulmiye ee Dimuquraaddiga ah.
Marka dhismaha dawladdu yahay nidaamka madaxtooyada, tiro kasta oo wasiir ah oo dawladda ka baxda xukuumaddu u dhici mayso. Laakiin madaxweynaha waxay ku tahay culays siyaasadeed, waxa aannu awood u leeyahay in beddelkii xubnaha ka baxay soo buuxiyo. Maadaama oo aannu ahayn xubno tiro badan, isla markaana saamayn badan bulshada ku lahaa, waxay ahayd sanqadh weyn oo siyaasadeed oo dalka iyo dunidaba soo jeedisay. Xoghayihii Qaramada Midoobay (QM) ee xilligaa, Bankii Moon, ayaa xataa ku soo hadalqaaday dhacdadaa siyaasadeed shir ay lahaayeen Golaha Ammaanka ee QM, January 2016. Wuxuu xoghayuhu si gaar ah u xusay Maxamed Biixi, wasiirkii khaarijiga; Xuseen Caydiid, wasiirkii caddaaladda; iyo aniga, oo ahaa wasiirkii madaxtooyada. Wuxuuna ku tiriyay isbeddellada siyaasadeed ee Somaliland ka dhacay.
Mid ka mid ah dadka caanka ku ah culuumta hoggaaminta, isla markaana buug badan ka qoray ayaa wuxuu leeyahay hadal noocan ah: “Leaders earn respect by making sound decisions, admitting their mistakes, and putting what’s best for their followers and the organization ahead of their personal agendas.”
Waxa annu soo wada shaqaynay madaxweynaha Silanyo, waana qof sharaf iga mudan laakiin kaladuwaanshaha fekerku waa shay bini-aadam Ilaahay ugu talo galay oo garashadooda iyo heer maskaxeedkooda u kala duway. Waana tiirarka dimuquraaddiyadda in aragtiyaha lagu kala duwanaado, markaa waxaannu ku kala duwanaannay aragtida hoggaamiyaha mustaqbalka hoggaamin doona dalka. Waxay ahayd 26|Nov|2015, iyadoo muddo bil ah markaa aannu shaqadii kasii maqnayn, markii aannu wefti ugu baxnay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco, waxaanay ahayd ujeedada safarkayagu in aan dadka gobolka degan gaadhsiino aragtidayda siyaasadeed lana socodsiino taageerayaashayada mawqifka aannu qaadanay iyo halka wax noo marayaan, waxaa si aad u mug weyn oo aannaan filayn anaga iyo bulshada Somaliland toona naloogu soo dhaweeyay meel u dhexaysa magaalada Burco iyo degmada qoyta, waxay noo muujiyeen taageero lexaad leh oo ay kumanaan qof iyo gaadiid ahi nagaga hor yimaadeed waddada laamiga ah. Dadkii ayaannu halkaa kula hadalay shirarna kula qaadanay magaalada Burco.
Muddo ayaannu dedaalkii sii wadnay oo aannu cidhiidhi iyo culays siyaasadeed ku haynay xisbigi Kulmiye, xukuumaddii iyo musharraxii loo cimaamaday. Sidoo kalana aannu gorgortan kula jirnay xisbiyadii siyaasadda ee mucaaradka ahaa, wakhtiyadaa oo aannu debadda iyo gudahaba kulamo ka qabaqaabinayay, waxa dadka qaarkood nagu tilmaami jireen xisbi afraad marka ay eegaan muhiimadda bulshada iyo duniduba na siinaysay. Wuxuu ahaa wakhti sannad ah oo aannu wadnay gorfaynta siyaasadda mustaqbalka sidii aannu u qaabayn lahayn iyo ciddii aan shuraako kula noqon lahayn cududdayada siyaasadeed. In kasta oo labo xubnood oo musharrixiin ahaa ku noqdeen Kulmiye, aqlabiyaddii waxaannu ku heshiinnay in aannu la midowno xisbiga mucaaradka ah ee Waddani hadii aannu ku qanacno marka la wada hadlo ka dib.
Waxay ahayd ayaamo adag, may hawl yarayn isku haynta iyo is dugsashada xubno culculus oo miisaankaa leh. Waxaanu inta badan bar kulan noo ahaa gurigayga, annagoo toddobaadkiiba labo jeer ama hal mar kulmi jirnay. Waxaa shirka noo guddoomin jiray labadii guddoomiye ku xiggeen ee hoggaanka Kulmiye ka midka ahaa, isla markaan xilalka xisbiga noogu sarreeyay markii hore. Waxaa afhayeen noo ahaa Xuseen Axmed Caydiid, oo ahaa nin codkar ah oo hal adayg badan. Run ahaantii waxay ahaayeen guud ahaan koox aad u qiimo badan iyo saaxiibbo aanan illaawin, manay qarsoonayn saamayntii aannu ku lahayn siyaasadda dalka.
Wadahadalladii Isbahaysiga iyo xisbiga Waddani
Xisbiyada dunidu waxaa lugu kala doortaa mabaadi’ ay ku kala duwan yihiin, sida Hantigoosad (Capitalism), Shuuci (Communism), Hantiwadaag (Socialism), Dimuqraaddiyad bulsheed (social democracy), iyo qaar kale oo badan. Somaliland siyaasaddeedu mabaadi’ kuma kala duwana. Garabkii Isbahaysigu waxay ku kala dooranayeen xisbiyada saddex shay oo kala ah: Hoggaamiyuhu ma yahay mid qaranka u cuntamaya isla markaana aynu wada shaqayn karno oo isfahm yeelan karno; Xisbigu ma leeyahay barnaamij siyaasadeed, ma se oggol yahay in aan la wadaagno oo waxna ku dari karno waxna ka beddeli karno; iyo haykal xisbiga iyo shuruucdiisa ma tahay mid xisbinnimo u qalanta.
Markii aan eegnay, Waddani wuu waafaqay waxyaalihii aan ku qiimaynaynay wada hadalladii xisbiyada mucaaradka isla markaana wuxuu aqbalay qodobbadii asaasiga aannu u arkaynay ee aan soo hordhignay, oo aan hoos ku tixi doono. Marka laga tago qodobbada aannu ku heshiinnay ee soo socda, waxaan jecelahay in aan xuso sidii guddoomiye Cirro noo danaynayey iyada oo uu ilaa shan ama lix jeer guriga iigu yimi, ragga kalana mid kasta gaar ula kulmay, oo dedaal badan geliyey.
Waxaa la sameeyay labo guddi oo wadahadallada noo kala metelayay. Muddo ayaa doodda iyo kulamadu socdeen. Waxaa iyaguna badnaa shir doceedyada kala duwan. Waxaana ka mid ahaa waxyaalihii la idsku mari waayay awood-qaybsiga siyaasada. Waxaa dhinacayagu soo bandhigeen in aan helno guddoomiyaha ama musharraxa iyo ku xigeenkiisa. Wuxuu oggolaaday guddoomiye Cirro in si furan oo siman loogu tartamo, laakiin ugu danbayntii kulan gaar ah oo ay yeesheen Maxamed Biixi oo musharrax noo ahaa, guddoomiye Cirro iyo Maxamed Uurcadde, ayaa Maxamed Biixi uga hadhay oo uga tanaasulay in uu tartan la galo, isaga oo ku saleeyay maadaama xisbiga aan ku cusubahay isla markaa aad ii muujiseen dimuquraaddiyad iyo dareen fiican oo lagu tartami karo, taas oo ah wixii aan Kulmiye ka waayey, waxaan uga hadhay musharaxnimadii Cabdiraxmaan Cirro.
Markii musharrixii aannu wadnay ay arrintaa isla meel dhigeen, xilkii guddoomiyannimo ee aannu dalbanayna waxay guddiyadii iyo Cirraba noo sheegeen in ay jirto ballanqaad naga horreeyay oo ay qolo kale u sameeyeen. Maadaama oo aan ahaa qofkii inta badani guddoomiyaha la doonaysay, waxaan qorsheeyay in aan xilku caqabad noqon haddii sida kale saaxiibbaday ugu qancaan xisbiga. Waxaanan kulamadii na dhexmaray guddoomiye Cirro ugu soo bandhigay qorshe cusub oo ahaa in la sameeyo Hoggaamiye iyo Guddoomiye, shaqadana loo qaybiyo. Fekraddaa ayaannu guddoomiyihii isla qaadannay. Sidoo kale xilalkii kale ee hoggaanka, golaha dhexe iyo fulinta ayaannu isla meel dhignay saamigii aannu ka heli lahayn, waana laga heshiiyey. Markii intaasi dhacday ee qodobbadii mabaadi’da guud iyo aasaasiyaadka ahaa ee hoos ku qoranna aan isla garannay, sidaas ayaa keentay in aannu ku qanacno, oo dooranno Waddani.
Qodobbada mabaadi’da guud ee heshiiska, oo qayb ka noqon doona xeerka iyo barnaamijka xisbigu, waxa ay salka ku hayaan dastuurka iyo qawaaniinta JSL, waana kuwan hoos ku xusan:
1) Ilaalinta iyo ku-dhaqanka Shareecada Islaamka, dastuurka, shuruucda kale ee dalka iyo xeerarka xisbiga, iyo ilaalinta qarannimada Somaliland;
2) Ka badbaadinta dalka hoggaanxumo ay sababto talamaroorsi iyo diktaytornimo u horseedi kara dalkan iyo dadkiisa dibudhac iyo burbur;
3) Dhisidda nidaam dawladeed oo ka caaggan musuqmaasuq, qabyaalad iyo maamul-xumo oo lagu xaqiijiyo wadatashi, wax-wada-qabsi iyo caddaalad, si loo gaadhsiiyo ummadda Somliland himilada ay muddada dheer higsanaysay, sida qarannimo buuxda, amni, horumar iyo caddaalad.
4) Xaqdhawridda wada lahaanshaha xisbiga iyo ka-wada-tashiga arrimahiisa, iyadoo la dhawrayo xeerarka xisbiga iyo awoodaha waaxyaha kala duwan ee ismiisaamaya ee uu ka kooban yahay xisbigu;
5) Ku dhaqanka mabaadi’da wadatashiga, maamul wanaagga, dhawrista awoodaha sharcidejinta, garsoorka iyo fulinta kuwaas oo ku salaysan nidaamka dimuqraaddiyadda ee aan ka hor imanayn Shareecada Islaamka iyo dhaqankeenna suubban;
6) Ilaalinta hantida qaranka nooc kasta oo ay tahay iyo awood-siinta hay’adaha u xil-saaran ilaalintooda, si loola xisaabtamo cid kasta oo ugu tasarufta sifo aan sharci ahayn, loona xaqiijiyo xakamaynta ku-takrifalkeeda;
7) Kobcinta iyo horumarinta xisbiyada qaranka iyo ka-ilaalinta faro-gelin kasta oo carqaladayn karta koritaankooda, si uu dalku uga gudbo nidaamka qabaliga ah;
8) Dhawrista xilliyada doorashooyinka ee shuruucda dalku muddaysay iyo qabyo-tirka arrin kasta oo sababi karta dib-u-dhacooda, iyadoo ay reebban tahay korodhsiimo ku timaadda damac siyaasadeed oo ku dhisan kursi-jacayl;
9) Dhawrista xuquuqda aasaasiga ah iyo xorriyadaha lama taabtaanka ah ee qofka ee Dastuurku jideeyey iyo horumarinta hay’adaha u adeegada;
10) Horumarinta saxaafadda iyo xaqdhawridda xorriyaddeeda, iyadoo wax-ka-qabashada gefefka lagu galo saxaafadda loo raaci doono nidaamka habka madaniga iyo xeerka saxaafadda, wixii qabyo ka ah xeerarkaasna la qabyo-tiri doono;
11) Dibuhabaynta hay’adaha xukuumadda sida wasaaradaha iyo hay’adaha madaxabannaan, iyadoo lagu salaynayo baahida qaranka, tashiilidda dhaqaalaha dalka iyo inay noqdaan kuwo si dhab ah ugu habaysan u adeegida bulshada;
12) Hurumarinta madaxbannaanida hay’adaha garsoorka iyo hay’adaha dawladda ee madaxa bannaan, si adeegyada ay bixinayaan u noqdaan kuwo tayo leh kuna salaysan caddaaladda;
13) Dardar-gelinta maamulfidinta, maamuldaadejinta, kalaxadaynta maamul ahaaneed ee gobollada iyo degmooyinka dalka, iyo tixgelinta tabashada gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle;
14) Iyadoo laga duulayo tabashooyinkii is-daba-joogga ah iyo qabyada ka muuqata Dastuurka dalka, in la furo Dastuurka, laguna sameeyo wax-ka-beddel iyo kaabis;
15) Kaqaybqaadashada adkaynta nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka, iyo horumarinta xidhiidhka caalamiga ah ee Somaliland la leedahay dalalka jaarka iyo kuwa caalamka, hay’adaha Qaramada Midoobey iyo ururrada caalamiga ah iyo kafogaanshaha wax kasta oo xidhiidhkaa wax u dhimi kara.
Madashii xafladda midowgu waxay ahayd mid aad u bilan oo dad toban kun oo qof ku dhow ka soo xaadireen. Aad ayay bulshadu isha ugu hayeen meesha uu maro miisaanka Isbahaysigu, dareen aad u fiicanna way ku soo dhoweeyeen go’aankii aannu ku biirnay xisbiga Waddani, waxaana noo muuqatay rejo fiican. Waxaa Soomaalidu tidhaahdaa hooso waliba hadal lehe, waxaan maalintaa hadalkaygii dhextaal uga dhigay hawraar dheegasho ah iyo hadal kooban oo aan dhacdadaa ku suntayay.
Maadaama oo ay jireen xulufo siyaasadeed oo ka soo jeedday degaanka aan ka dhashay iyo degaanka uu ka soo jeedo musharraxii Kulmiye loogu cimaamaday ee aannu isku maan dhaafnay xukuumaddii aan ka midka ahaa, anigoo tilmaamaya midnimada iyo dadka reer Somaliland inay wanaagsan tahay in bartilmaameed laga dhigto, qabyaaladda iyo in labo labo reer la isu xulufaystaanna aanay qarannimada u fiicnayn. Waxaan fargaarihii kaga dhawaaqay, qaar baa odhan doona Jeegaanta ayaad burburinaysaan. Waar burburinmayno e, Jeegaantii waxa aannu ka dhigaynaa Giraan oo dalka oo dhan ayaannu isku xidhaynaa.
Tuducyadan aan tiriyay waxaan ka soo dheegtay heestii Ducaale Dhagaxay (Toban toban halbaa dilay, hadal sii dheh baa dilay…):
Siyaasadda nimaan himmo lahayn,
Oo hawo iyo been isku akhriyey,
Hiraalkiisu dhaw yahay oo,
kursiga u hamuun qaba,
Himiladiisu keen tahay,
Oo shilinka uun ka halabsada,
Hadafkiisu qolo yahay oo,
hayb hayb u kala gura,
oo lagu hoobtay baa dilay.
Maalmihii Ololaha Waddani.
Waxaannu la midownay xisbiga Waddani. Wuxuu ahaa xisbiga mucaaradka ugu wayn. Wuxuu ahaa xisbi jira oo annaguna aannu wax ku biirin karaynay, maadaama oo aannu ahayn dad xisbiyahanno ah oo sumcad iyo saamaynba bulshada ku lahaa. Waxa aannu dhiig cusub iyo dardargelin ku soo kordhinnay xisbigii Waddani oo laga dareemay dhaqdhaqaaq cusub iyo in cudud xooggani ku soo korodhay. 19|Oct|2016 ayaa shirkii golaha dhexe ee xisbiga Waddani nooga furmay magaalada Hargeysa, iyadoo gebgebadiisii musharrax madaxweyne loogu doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, halka anigana la iigu doortay Hoggaamiyaha Xisbiga.
Waxaannu bilownay dibuhabayn iyo dardargelinta xisbiga oo aan laamaha debadda iyo gudahaba safarro galaabixinay. Sidoo kale wacyigelin ballaadhan ayaannu u samaynay taageerayaasha xisbiga si ay ugu diyaar garoobaan doorashadii Nov 2017. Waxaan u xil saarnaa diyaarinta qorshaha ololaha ee xisbigu doorashada ku geleyo. Waxaanan abuuray koox soo qorshaysa maamulka iyo maaraynta ololaha. Prof. Ridwaan Maxamed Cismaan, oo ahaa aqoonyahan baadhista iyo qoraalka ku xeeldheer, ayaan u xil saaray ururinta talada iyo dejinta qoraalka Istaraatiijiyadda Ololaha.
Hoggaanka Xisbiga iyo musharrixiinta oo 12|12|2016 shir la lahaa safaaradaha waddamada reer Galbeedka ee Nairobi ku yaalla, isla markaana kulan maamul oo is diyaarin ah ku yeeshay halkaa, ayaan ugu soo bandhigay xogtii iyo qabyo-qoraalkii ugu horreeyay ee Qorshaha Ololaha (Waddani Campaign Strategy), taas oo aannu ugu horraynba diiradda ku saarnay wararkii saadaalinta codadka iyo heerarka la kala joogo. Waxay naga ahayd si fekrad looga qaato oo keliya, xogtana waxaa diyaariyay qaar ka mid ah hay’adaha madaxa bannaan oo si lamafilaan ah nagu soo gashay. Waxa aanay kala maraysay taageerada xisbiyadu xiligaa [Dec 2016]:
Waxay u muuqatay in si laxaad leh na looga horreeyo in kasta oo dadku si ugu wada qanacsanayn, haddana werwer ayaa igu jiray ah in xisbiga Kulmiye haysto jaanisyo badan, iyadoo haddana ay jirtay fursado noo saamaxayay in aan ka adkaanno. Waxaannu isla qaadannay dedaal iyo qorshaha oo aannu soo dhammaystiro. Waxaan mar labaad u gudbiyay musharraxa nuqulkii qorshaha kaambaynka oo dhammaystiran, wixii isaga ku xidhnaa mooyaane.
Waxaan ololaha u soo jeediyay in loo magacaabo wiil dhalliyaro ah oo aqoonyahan ah. Waxa la isla qaatay in magaca ololuhu noqdo Waddani 2017, iyadoo halkudhigguna ahaanayo Rejada Shacabka. Calaamadda ololuhu waxay ahayd Giraan wareegsan oo gacmo is haysta ka samaysan. Sidoo kale waxaan maamulka ololaha u qorshaynay in uu noqdo heer qaran, heer aag (Zone), heer gobol, heer degmo iyo heerka goobta codbixinta, iyadoo ay jirayaan shaqaale 10,000 gaadhayay oo aannu ugu talo galnay in ay codbixiyayaasha u gaadhaan guri-guri, iyadoo tabo iyo farsamooyin la isticmaalayo. Dhaqaalihii aannu oddorosnay ee ahaa toban milyan oo Dollar, waxaa la helay qiyaas ahaan 60% oo u dhigmayey lix milyan oo Dollar. Iyadoo aannu samaynay qorshihii isticmaalka maaliyadda (resource planning). Ololaha sidiisa ayaa buug looga qori karaa balse waxaan ka soo qaadanayaa tusmo kooban. Istaraatiijiyadda Ololaha waxaa ka mid ahaa yoolka codka aannu higsanayno oo ahaa 50% ilaa 60% ee inta codaysa. Oddoroska cododka ee guud ee la filayey oo ahaa 75% ilaa 85%, iyo tirada gobollada iyo degmooyinka aannu qorshaynay mid kasta in laga helo, inta badani sidii aannu filaynay ayay u dhacday, marka laga reebo meelo wax iska beddeleen, khaladaadkii aannu samaynay iyo meelo aannu aaminsannahay in wax-isdabamarini ka dhacday.
Waxay ahayd 21|10|2017, markii ay Somaliland ka bilaabmeen maalmihii ololaha ee doorashada madaxtooyada ee 13|Nov|2017 loo sharciyeeyay in ay xisbiyadu ku soo bandhigaan barnaamijyada siyaasadeed iyo farsamooyinka ay bulshada ku kasbanayaan. Xisbi kastaa wuxuu lahaa 7 maalmood oo talantaalli ah oo saddexda xisbi ka bilaabayaan saddex maalmood oo isku xiga ilaa dhammaadkana ku wadayaan. Waxaa loo kala horreeyay Ucid, Kulmiye iyo Waddani. Komishinka oo siidhiga u hayay, ayaa xisbiyada ku wargeliyay in subaxa Sabtida uu ololihii bilaabmay. Waa la isku fasaxay.
Waddani ahaan waxaannu haysannay fursad fiican, maadaama oo labada xisbi ee kale nooga horraynayeen isusoobaxyada, annagoo barnaamijkii noo qorshaysnaa sii daynayna ayaannu haddana ka faa’idaysanaynay khaladaadkooda, oo wixii ay soo dhigaanba xagga kale u dhigaynay. Kulmiye oo ahaa xisbiga loollanka xooggani noo dhexeeyay, waxaa ka mid ahaa khaladaadkiisa in ololihiisa ay saldhig u ahayd labo reer oo uu taageedooda si weyn u rejaynayey oo loogu yeedhi jiray Jeegaanta. Waxaannu daba qaadnay qabyaaladdii oo tooshka ku ifinnay. Halka ay annaga olalahayga saldhig u ahayd Giraan oo aannu ku metelaynay degaannadii oo dhan oo gacmaha is haysta. Hadalka la is odhanayay wuu badnaa, balse ma doonayo hadallo xanaf iyo xagtin lahaa in aan soo naqliyo. Waxaan u arkaa in aan wax faa’ido ahi ku jirin.
Waxaa la soo gaadhay 23|Nov|2017, oo ahayd maalintii aannu ololaha u lahayn. Waxaannu madaxdii si qorshaysan ugu qaybinnay gobollada dalka, annagoo farriinta ololaha ee xisbiga u daynay in uu musharruxu gudbiyo. Balse waxaannu la xoojinaynay maalinba qodobka bartilmaameedka noo ah in koox waliba gobolka ay joogto ay ku lafaguraan, wixii kale ee degaankaa la joogo khuseeyana wixii siyaasad ahaan nooga qorshaysan aann u usoo bandhigno. Musharraxu wuxuu maalintii koowaad ka hadlayey caasimadda dalka, waxaan aniguna ku qornaa Ceerigaabo. Waxaan guure ku soo galay abbaara 3-dii habeennimo. Waxaa buuxdhaafay garoonkii xorriyadda iyadoo aan 8:00 am la gaadhin! Weftigayagii iyo madaxdtii gobolka ee xisbiga waannu soo galnay, iyadoo dadku si xamaasad leh noo soo sugayeen oo noo soo dhoweeyeen. Halkaana waxaannu uga jeedinnay khudbadihii noo qorshaysnaa.
Waxaannu isu waydaarannay oo safarro galaabixinay gobollada iyo degmooyinka dalka ilaa maalintii u danbaysay oo aan ku soo gebagebeeyay magaalo-madaxda gobolka Togdheer, oo aan maalintaana khudbaddii ku soo qaatay dardaaran nuxurkiisu ahaa in aan dhiirrigeliyo taageerayaasha Waddani, komishinka u dardaarmo caddaalad, bulshadana aan xasuusiyo in ay tahay doorasho oo ciddii Ilaahay u qoray uun helayso, balse shayga ugu muhiimsan, guusha ugu ballaadhani ahina uu yahay ilaashiga nabadgelyada iyo qarannimada. Doorashadii way soo gebagebowday, waxaana la gudogalay tirintii cododka. Habeennimadiiba waxaa dhibaato weyni naga soo gadhay barnaamijkii isugaynta iyo tirinta cododka (PVT system) oo naga caddilmay, oo sidii aannu doonaynay u shaqayn waayay. Waxay xogtu igu soo gaadhay in ay is weydaarteen hannaankii muraaqibiinta ee lagu diyaariyay iyo hannaan cusub oo aan lagu wargelin hawlwadeennadii, oo cillad farsamo dhacday.
Waxaa qorshahaygu ahaa in aan natiijada doorashada soo saaro inta aannu komishinku ku dhawaaqin. Waxay ahayd si aannu u ogaanno wixii aannu helay ee xaqiiqada ahaa, annagoo isticmaalaynay xogtii muraaqibiintayadu na soo siiyeen ee goobta tirinta codadka ka soo baxday.
Waxaa ka mid ahaa meelaha dayaca weyni ka dhacay ilaalintii cododka oo hawlwadeennadii muraaqibiinta iyo maamuliddeediiba hoosudhac weyni ku yimi, xisibigii Kulmiye ee loollanka adagi naga dhexeeyay meelihii uu ugu taageerada badnaa, Maroodijeex iyo Saaxil ayaa muraaqibiintoodii gaabis ka yimi, qaarna aanay kaba soo xaadirin goobtii ama lala wareegay oo xisbigii kale u gacan galay. Halkaasina waa meelaha tuhunka weyni ka dhashay in wax-isdhaafini ka jirtay. Waxaan aaminsanahay in dhammaan gobolada hoos dhac filashadayadii ay ka jirtay, way se kala bandaayeen hoosudhaca taageero ee ku yimi. Si kasta wax ha u dhacaane, waxa la soo gaadhay gebagebadii tirinta cododka. Komishinkuna wuxuu isu diyaariyay in uu natiijada soo saaro.
Natiijadadii aannu qorshaynay ee filaynay waxay ahayd in codadka guud noqdaan, 75% oo la mid ah 523 999, waxaana ku soo baxay natiijadadii 79.4% oo la mid ah 555 142, qiyaastii tiradii guud ee codadka ee aannu filaynay iyo tii soo baxday aad ayay isugu dhowaayeen waxaa u dhexeeyay faraq ah 31 143. Waxaana natiijadii lagu dhawaaqay noqotay in Kulmiye helo 305 909, halka xisbigaygii Waddani helay 226 092, Ucidna uu helay 23 141, halkaana la sheegay in guushii ku raacday Kulmiye.
Intii aan guusha Kulmiye loogu dhawaaqin ayay soo gashay suuqa in Kulmiye horreeyo, oo ay jirto wax-isdabamarin iyo doorashadii oo wax lays waydaariyay, kaaga darane waxaa suuqa laga soo helay ugu yaraan labo buug oo waraaqihii lagu codaynayay ah ku yaallaan, waxaana ka bilaabmay kacdoon taageerayaashii Waddani ka dib markii ay saxaafadda ka arkeen waraaqaha la helay saluugga madaxdii Komishinka noo joogtay ka muujiyeen natiijadii la sugayay. Sidoo kale muddaharaad aan cidi abaabulin ayaa is qabsaday magaalooyinkii waaweynaa ee Somaliland, oo dhimasho iyo dhaawacba waa la soo sheegay. Madaxdayadii talo ayaa nagu caddaatay, canaan iyo hiifna taageerayaashii way noo soo jeediyeen. Waxaannu ku yaacnay komishinka oo kulan foodda isku darnay, markii labo maalmood aannu iskaga daba noqonnay, wax rejo ah oo soo socotaa nooma muuqan. Subixii danbe ayaan gaar ula baxay, oo shir la qaatay, Dr Cabdiraxmaan Cirro oo xaalkiisu aad u murugsan yahay. Waxaanan go’aansaday noloshu waa taariikh e, in aan badheedhahayga u sheego. Waxaan ku idhi: “Guddoomiye, waxaynu qorshaynay oo aannu kula doonaynay in aad noqoto madaxweyne xaqiijiya himalada ummaddiisa oo dalkan horumariya, mideeya oo hagaajiya, balse ma muuqato oo codadkii si laxaad leh ayaa la inooga horreeyaa, ha la boobo ama si kale hala inooga bursado e. Waxay ila tahay in aanad dooran hoggaamiye dalkiisa burburiya.” Musharruxu runtii si deggan oo odaynimo ka muuqato ayuu iila qaatay. Waxa aannu yidhi “Waan arkaa sida xaal yahay e, dadka ila qanci.” Wuxuu isu diyaariyay in uu dadka la hadlo, waxa aannu soo saaray farriintiisii, iyadoo aan isla waafaqnay in aan aniguna hadlo oo jawiga qaboojiyo.
Habeennimadii ayaan waraysi bixiyay, iyadoo ujeeddadu tahay in aan jawiga dejiyo. Waxaan u sheegay hadallo kooban oo aan kaga jawaabay su’aalihii weriyaha iyo dareenkii bulshada, taas oo ay dhextaal u ahayd “Doorashadii maannu qaaddicin, oo waa annagii galnay. Natiijadii waynu sugaynaa wixii ka soo baxa, dalkana nabadgelyadiisa na looga biqi maayo annaga Waddani ahaan.” Waxa bilaabmay in dareenkii bulshadu si tartiib ah u soo debco. Waxaana galabnimadii danbe Komishinkii Doorashooyinku ku dhawaaqay natiijadii, oo sida aan kor ku xusay ku soo gebagebawday.
Halkaa markay marayso ayaannu isugu yeedhnay kaadirkii iyo madaxdii xisbiga Waddani si aannu go’aan loo dhan yahay u wada qaadanno. Dood dheer ayaa la galay oo qaadatay ilaa 5 saacadood. Ugu danbayn waxaa la isla waafaqay in natiijada doorashada la aqbalo, dalkana qas laga badbaadiyo. Waxaa khudbadii musharraxa u ahayd dhextaal hadal dhaxalgal ah:
“Waxaan qaatay maanta go’aan qadhaadh oo aan hubo in aannu farax gelinayn taageerayaasha xisbiga WADDANI, kaasi oo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Somaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi. Umaan tanaasulin KULMIYE. Waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda reer Somaliland.
“Waxaan go’aansaday in aan aqbalo natiijada la soo dhoobdhoobay, sidii uu hore u yidhi Madaxweyne Daahir Rayaale ‘Gacantayda Somaliland ku burburi mayso’ , aniguna waxa aan leeyahay dalkayga damacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo.”
Muxaafadnimadu macnaheedu ma aha nacamlayn iyo waxyaalaha hadda loogu yeedho guulwadayn. Muxaafadnimadu ma aha in aad madaxda dawladda iyo madaxweynaha ka qosliso ama uga sheekayso wax ay ku farxaan. Sidoo kale ma aha inaad saxaafadda madaxda ka amaanto ama mucaaradka ka caydo. Aslanba caydu siyaasadda ka mid ma aha ee waa akhlaaqxumo iyo wax dhaqanka wanaagsan ka baxsan.
Markaad tahay mas’uul heerarkiisa kala duwan, waxaa hubaal ah tuhun ayaa kula deris ah, haybadna waa lagugu maamuusay, wax aanad qabinna waa lagu saarayaa wax aanad ahayna waa lagaa dhigayaa oo lagugu amaanayaa. Dabcan waxaa dhacaysa in aad is difaacdo, waana suurta gal in aad xoog intii loo baahnaa ka badan u isticmaasho, saxna ma aha ee waxay u baahan tahay xikmad aad ku dheellitirto.
Nebi Maxamed SCW oo ah tusaalaha Islaamka halka ugu sarraysa qaar ka mid ah saxaabadiisii ayaa ku tuhmay in aannu u caddaalad samayn (Caddaalad samee maad caddaalad samayne), waanu ka shaafiyay oo ka daweeyay oo uga duceeyay tuhunkaa. Xilligii Abii Bakar qaar ayaa sekada diiday. Cumar sidoo kale isagoo khudbadaynaya ayaa qaar saxaabadii ka mid ah ku tuhmeen in uu caddaalad-darro sameeyay, oo ay hadalkii ka kala jareen oo yidhaahdeen xaggaad ka keentay marada dheeraadka ah. Waxa aannu uga shaafiyay si xikmad leh.
Waxaa dhici jirtay xilliyadii aan madaxtooyada ka shaqaynayay in dacaayado iyo been-abuur fara badan layga faafiyo. Waxaa ka mid ahaa toorray ayuu haystaa uu dad ku eryaday, oo xataa ay sawirkayga oo toorray sita ku faafiyeen saxaafadda. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa Xirsi ayaa yidhi waxaan ahay 40 jir 40 milyan haysto; waana been oo maan odhan, afartan sannadoodna waa ka waynaa xilligaa, afartan milyanna ma haysto, lacagna kamaan tabcan xilkii dawladda aan hayay.
Xilliyadii aannu wax yar uun joogay madaxtooyada waxaa marar badan masuuliyiin iyo siyaasiyiin kala duwani sheegeen madaxweynuhu xanuunsanayo. Arrintaasi may jirin. Waxa keliya ee ku soo kordhay wuxuu ahaa in aan xusuusta madaxweynuhu sideedii hore ahayn. Waxaana lagu jiraa dhismihii xukuumadda iyo kala wareegga labadii dawladeed ee isbeddelay (madaxweyne Riyaale iyo madaxweyne Silanyo). Filashada bulshadu ka qabtey Silanyo aad bay u sarraysay. Waxaan ku dedaalay in aan madaxweynaha u sii sheego kulamada ka hor cidda u imanaysa iyo waxa ay kala hadlayaan si uu qoraal ugu sii diyaarsado, sidoo kalana aan xasuusiyo wixii uu illaawo inta kulanka lagu jiro.
Marwada 1aad ayaa ahayd qof ku hawlan caafimaadka madaxweynaha iyo taageerada, tilmaanta iyo talooyinka ay iskula barbar taagayso odaygeeda si uu xilka u guto. Runtii waxay ahayd haweenay wax baratay ninkeedana ka danbaysa, annagana shaqada nagu ixtiraamta. Balse labadii sano u danbeeyay talada ayay ku soo dhowaatay. Muddo ka dib waxaa mucaaradka iyo dad badan oo kala duwan ka soo baxay guux iyo markii dambe oo qaar badani xaaladda caafimaad ee madaxweynaha uga hadleen si ku talaxtag ah. In kasta oo weliba madaxweyne Silanyo uu ahaa shakhsiyad aad bulshadu u ixtiraanto, maraxaladaha noocan ah waxaa laga mamaarmaan ahaa in aan difaaco madaxweynaha iyo dawladdiisaba, waayo waa shaqadii la ii igmaday. Marka labaad haddii madaxda dalka ugu sarraysa haybadda laga qaado oo dawladnimada la qaawiyo, dee waxba soo hadhi maayaan. Marka horana Somaliland dunidu ma aqoonsana, dawladnimadeediina si fiican weli uma hanaqaadin.
Waxaa dhacaysa in nidaamka aad ka mid tahay la dhaleeceeyo sax iyo khaladba. Dabcan waa shaqadaada in aad difaacdo. Waxaa se laga yaabaa in mar danbe aad ogaato in khalad jiray, oo waxaa la idinku eedaynayana cid idinka mid ahi samaysay. Way adag tahay in aad dib u soo fadhiisato saxaafadda, oo ka tidhaahdo maan ogayne qaar naga mid ah ayaa waxaa iyo waxaa sameeyay. Balse taa beddelkeeda. waxaa kula gudboon sixitaan xikmadaysan iyo in aad meeshii khaladku ka dhacay xalliso, oo jawaab u noqonaysa ujeeddadii muwaadinku dhibta ka tirsanayay.
Odayga weyn ee caanka ah Xaaji Cabdi Waraabe, oo lagu yaqaan in uu weligii ahaa darafu-dawle, ayaan kala kulmay khaslad iyo dabeecad aan la yaabay. Marka uu kaala hadlayo danaha qaranka, waxba kuu qarin maayo oo canaan iyo ceeb wixii aad leedahay indha ayuu kaa saarayaa, balse marka uu kaa baxo, wax jira iyo wax aan jirinba wuu ka difaacayaa dawladdaa.
Waxay ahayd horraantii sannadkii 2015 markii goor habeennimo ah aannu shir isugu nimo madaxweynaha, wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaa Warancade, wasiirkii arrimaha dibadda ee xilligaa, wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaa Cadami, guddoomiyahii Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada kala duwan. Waxaa laga arrinsanayay muddaharaad ay ku dhawaaqeen xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, oo la soo tebiyay in rebshado weheliyaan. Waxaa la falanqeeyey sidii arrintaa looga hortegi lahaa oo qofba dhinac iska taagay. Waxaa ka mid ahaa aragtiyaha iga yaabiyey, guddoomiye Muuse oo yidhi: “Hadal uun baa ka danbayn e, aan guddoomiye Cirro soo xidhno!” Xilligaa Cabdiraxmaan wuxuu isku hayey guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha xisbiga Waddani. Waa la kala aamusay, cidi kuma raacin, waxaana aakhirkii arrintii loo xalilay si dhib yar. Garan maayo in ay ka ahayd ku-xumayn iyo in ay ka ra’yi uu wax ku xallilayo.
Dhacdooyinka siyaasadda ee xilliyadii mucaaradka iyo muxaafidku way badnaayeen. Wax kooban oo dul-ka-xaadis ah ayuun baan ka soo qaadayaa. Waxay ahayd horraantii sannadkii 2014 markii shir madaxweynaha lagu casuumay aan ka qaybgalay oo lagu qabtay magaalada Liverpool ee carriga Ingiriiska. Waxaa taagnaa maalmahaa dood ka socotay golaha Baarlamaanka ee Somaliland iyo mooshin ku saabsan in xeer hooska golaha wax laga beddelo, oo awoodda iyo maamuuska labada gudoomiya-ku-xigeen, ka soo jeeday xisbi xaakimka, hoos loo dhigo. Arrintan oo uu hor kacayay guddoomiyaha xubnaha mucaaradka ku ahaa xukuumaddii aan ka mid ahaa ee Silanyo, waxay ahayd tallaabo siyaasadeed oo si gaar ah u taabatay xukuumadda, una muuqatay in golihii lagaga adkaaday. Markii aannu isu nimi madaxweynaha oo gurigiisa London joogay, waxaa ka muuqatay mooralxumo, waxa aannu igu yidhi dalki iiga sii horree oo sii bax waad arkaysaa in golihii lala wareegaye. Waxaan u sheegay in aan bixi doonno marka aan shirka ka soo noqonno. Sidii ayaannu ku tagnay shirkii na laga sugayey ee Liverpool.
Markii khudbadda la iigu yeedhay waxaan ku talo galay in xiisaddii siyaasadeed taagnayd xilligaa aan wax ka idhaahdo, anigoo guddoomiyaha baarlamaanka u duur xulayana waxaan soo qaatay sheeko. “Berigii hore ciyaarta waxaa ka mid ahaa legdinta. Markaa, nin caano riyaad ka dhergay ayaa labadiisii xaas ku yidhi ila legdema, oo inta uu midba xag u daayay marba mid legday. Ka dibna wuxu u boqoolay magaalo, oo uu yidhi yaa ila legdamaya. Waxaa u soo baxay nin xoog badan oo intuu kor u qaaday beerka kaga degay. Ninkii caanaha riyaha ka dhergay ayaa sanka caano ka keenay. Qolada mucaaradka waxaan leeyahay, saaxadda siyaasadda waa isugu imanaynaa e. bal sanka caano ha ka keenina!” Xaqiiqo ahaana fadhigii koowaad ee golaha ayay xildhibaannadii xukuumadda oo aannu abaabulnay si laxaad leh guul uga soo hooyeen. Arrintiina waxay noqotay sheeko caan ah oo la odhan jiray Mooshinkii Caanaha Riyaha.
Arrimaha siyaasadda ayaa iska sidaas ah, oo marba labo miis isugu keena. Maalinta hore waxaannu miis ku wada tashanaynay Muuse Biixi oo ahaa guddoomiyaha Kulmiye, maantana waxaan miis wada joognaa Cabdiraxmaan Cirro oo ah guddoomiyaha Waddani.
Wakhtigan aan muxaafidka ahaa waxaan ku dedaali jiray in aan shaqadayda ka adkaado, dadka runta u sheego, aan badiyo dhexgalka bulshada, ballamahana ilaaliyo iyo in aan xoogga saaro mashaariicda horumarka oo aan inta badan wax muuqanaya oo la taaban karo iyo dhaxal dalka uga tago. Dadkana waxaan ugu jeclaa dadka xaqaa’iqa suuqa ka jira ii sheega.
Tags: Mucaaradnimadii iyo Maxaafadnimadii
Next post Shaqadii Farxadda Badnayd
Previous post Hay’adda Horumarinta Waddooyinka ee Maamulka Somaliland